Ungawuqalisa Kanjani Ngokushesha Umkhankaso Osuselwa Esimweni Sezulu Ongenawo Amakhono Okufaka Amakhodi | Martech Zone
Ngemuva kokuthengiswa kweBlack Friday, ukuthengwa kokhisimusi nokuthengisa ngemuva kukaKhisimusi sizithola sisenkathini yokuthengisa eyisicefe kakhulu onyakeni futhi - kuyabanda, kuyimpunga, kuyana futhi kuyakhithika. Abantu bahleli emakhaya, kunokuba bazulazule ezitolo ezinkulu.
Ucwaningo lwe-2010 ngusomnotho, uKyle B. Murray, uveze ukuthi ukukhanya elangeni kungakhuphula ukusetshenziswa kanye nethuba lokusebenzisa. Ngokufanayo, uma kunamafu futhi kubanda, amathuba ethu okusebenzisa imali ancipha. Ngaphezu kwalokho, emazweni amaningi, izindawo zokudlela, izindawo zokuphuza utshwala nezitolo ezinkulu kuyavalwa ngenxa yemingcele kahulumeni. Sekukonke, isibikezelo asibukeki sethembisa kakhulu.
Ungakhuphula kanjani ukuthengisa kwakho kule sizini yasebusika eyimpunga futhi enesicefe yango-2021? Isu elilodwa elihle ukuthi, ngezinsuku zesimo sezulu esibi kakhulu, ukhuthaze izethameli zakho ukuthi zithenge ngemilayezo eyenziwe yaba ngeyakho, enemixholo. Ngezinsuku ezibandayo, zasebusika, ungaqala imikhankaso esuselwa kusimo sezulu enganikeza isisusa kumakhasimende akho ukuwakhuthaza ukuthi asebenzise imali ethe xaxa - noma yini evela kukhodi yekhuphoni, ukuthunyelwa kwamahhala, i-freebie ekhadini lesipho noma amaphuzu wokuthembeka angeziwe atholakele ngemuva kokubeka umyalo. Umsindo uphelele, kepha ungawakhomba kanjani kuphela lawo makhasimende anesimo sezulu ahlangabezana nezimo ezithile?
Kuyini ukumaketha kwesimo sezulu
Ukumakethwa kwesimo sezulu (nokumaketha okususelwa kusimo sezulu noma ukumaketha okubangelwe yisimo sezulu) kungukuzenzakalela kokumaketha okunamandla okusebenzisa idatha yesimo sezulu yesikhathi sangempela ukudala izikhangiso nokwenza ngezifiso imiyalezo yokuthengisa ngokuya ngesimo sezulu sendawo.
Kungabonakala njengokuyinkimbinkimbi futhi kudla isikhathi ukwethula umkhankaso osuselwa kusimo sezulu kodwa ngenhlanhla i-SaaS, izixazululo zokuqala ze-API zingaletha izixazululo ezisheshayo zokuthengiselana kanye nezisombululo zesabelomali esiphansi samabhizinisi amancane naphakathi nendawo.
Ukusiza amabhizinisi kulobu busika, thina, e Voucherify, balungiselele ikesi lokusebenzisa kanye nesifundo somkhankaso wokumaketha ngesimo sezulu esinekhodi eliphansi ukuze ugqozi. Sigxile kuzimo ezingasethwa ezinsukwini ezimbalwa ukukuvumela ukuthi usisebenzise kule sizini. Senze ucwaningo futhi sahlela yomibili imikhankaso yekhuphoni yesimo sezulu esezingeni lomhlaba kanye nekhadi lesipho, sisebenzisa ikhodi encane, sisebenzisa amapulatifomu amahlanu okuqala we-API. Ukusetha kuthathe amahora ambalwa nje, kufaka phakathi nesinyathelo semibono. Besidinga kuphela ukufaka ikhodi kwifomu le-pop-up eliqoqa ama-imeyili futhi lihlanganyele i-IP-based geolocation yomsebenzisi kepha uma unefomu elinjalo ngaphandle kwebhokisi kungxenyekazi yakho ye-CMS, ungeqa leso sinyathelo.
Ukusetha imikhankaso, uzodinga izinkundla ezilandelayo:
I-Geolocation Web API
Ingxenye - Ipulatifomu Yedatha Yamakhasimende
Voucherify - Isoftware Yokuphatha
Braze - Ukumaketha nge-imeyili
I-Twilio - Ukumaketha Kwamaselula
Wonke la mathuluzi anesilingo samahhala esitholakala kusuka ngoJanuwari 2020, ngakho-ke ungazama lokhu kusetha ngaphambi kokuzibophezela kunoma ikuphi okubhaliselwe.
Senze imikhankaso emibili- eyodwa yezinkampani zasekhaya kanti enye eyamabhizinisi omhlaba. Nasi ukubuka konke okufushane kwalokho ongakusetha emahoreni ambalwa usebenzisa amathuluzi ashiwo ngaphambili nokuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzilandele ukusetha konke:
Isibonelo 1: IBerlin Café - Local Weather Campaign
Lo umkhankaso wokuphromotha wekhefi eBerlin. Ekuqaleni kwesizini yasebusika, abasebenzisi bathola amakhodi amabili wokuphromotha ngomyalezo wombhalo abangawusebenzisa kuphela uma kuneqhwa (ikhodi yokuqala iyasebenza uma izinga lokushisa lingaphezulu kuka -15 ° C, elinye uma izinga lokushisa lingaphansi kuka -15 ° C). Amakhuphoni akhutshaziwe noma anikwa amandla nsuku zonke ngokuzenzakalela, ngokuya ngesimo sezulu saseBerlin esisihlola nsuku zonke ngo-7 ekuseni nge-automation yeZapier. Amakhuphoni angahlengwa kanye kuphela kwikhasimende ngalinye.
Nawu umqondo wokuphromotha:
Uma kuneqhwa eBerlin, nika amandla isigqebhezana somphakathi esingu--20%.
Uma kuneqhwa futhi izinga lokushisa lehle ngaphansi kuka -15 ° C eBerlin, nika amandla isigqebhezana somphakathi esingu--50%.
Uma kungakhithiki, khubaza kokubili okunikezwayo.
Lokhu kungukugeleza umkhankaso ongakusebenzisa:
Lezi yizinyathelo okuzodingeka uzilandele ukusetha:
Ngenisa isisekelo samakhasimende akho ku-Voucherify (qinisekisa ukuthi amaphrofayili wamakhasimende afaka indawo nenombolo yocingo).
Yakha ingxenye yamakhasimende avela eBerlin.
Dala amakhodi amabili azimele we -20% no -50% ngephethini yekhodi eyenziwe ngezifiso.
Yabelana ngamakhodi namakhasimende nge-SMS ngokuhlanganiswa kweTwilio. Umlayezo oyisibonelo ungabukeka kanjena:
Iya kuZapier bese wakhe ukuxhumana ne-AerisWeather.
Ngaphakathi kokugeleza kukaZapier, cela i-AerisWeather ukuthi ihlole isimo sezulu eBerlin nsuku zonke ngo-7 AM.
Setha ukuhamba komsebenzi okulandelayo kweZapier:
Uma isimo sezulu sihlangatshezwa, uZapier uthumela isicelo se-POST ku-Voucherify ukuze anike amandla amavawusha.
Uma izimo zezulu zingahlangatshezwa, uZapier uthumela isicelo se-POST kuVoucherify ukukhubaza izaphulelo.
Isibonelo 2: Umkhankaso Wesimo Sezulu Somhlaba Wonke Wokuthola Isitolo Sekhofi Esiku-inthanethi - Let It Snow
Lesi simo somkhankaso senzelwe izinkampani zomhlaba ezinabasebenzisi abasakazeke ezindaweni ezahlukahlukene. Ngalokhu kugeleza, ungakhomba abasebenzisi abavela emadolobheni ahlukene nakwamanye amazwe ngokuya ngezimo zezulu zendawo.
Uma kuneqhwa, abasebenzisi bazothola isigqebhezana se-thermos yamahhala, ehlengekayo uma i-oda labo lingaphezu kwama-50 $.
Uma kuneqhwa futhi izinga lokushisa lingaphansi kuka -15 ° C, abasebenzisi bazothola ikhadi lesipho elingu-40 $ elivumelekile kuma-oda angaphezu kuka-100 $.
Kusetshenziswe kanye ngekhasimende ngalinye.
Ukusebenza kwekhuphoni ezinsukwini eziyisikhombisa ngemuva kokushicilelwa.
Ukusebenza kwekhadi lesipho ngesikhathi somkhankaso (kithi, kusuka ngo-01/09/2020 kuya ku-31/12/2020).
Uhambo lomsebenzisi kulo mkhankaso luzobukeka kanjena:
Isikhangiso (isibonelo, i-Google noma i-Facebook Ad) siholela ekhasini lokufika nefomu okufanele ligcwaliswe. Ngefomu, isivakashi kufanele sikwazi ukwaba indawo bese sifaka ikheli laso le-imeyili ukuze sibambe iqhaza emkhankasweni osuselwa kusimo sezulu.
Uma umsebenzisi, endaweni yabo (enikezwe isiphequluli), ngesikhathi sokugcwalisa ifomu, enezimo zezulu ezichazwe kulo mkhankaso, bazothola isigqebhezana noma ikhadi lesipho, ngokulandelana.
Amakhuphoni noma amakhadi ezipho azothunyelwa kubasebenzisi abaqeqeshiwe ngokusatshalaliswa kwe-imeyili kweBraze. Amakhuphoni / amakhadi ezipho azoqinisekiswa ngokuphikisana nemithetho yomkhankaso (ngeVoucherify), futhi amakhasimende kuphela ama-oda awo anelisa imibandela ebekiwe azokwazi ukuwahlenga.
Ngabe izosebenza kanjani ngokombono wezobuchwepheshe?
Umsebenzisi ufika kufayela le- ikhasi lokufika futhi ugcwalisa ifomu lokwabelana nge-imeyili yabo kanye nemininingwane ye-geolocation nge isiphequluli se-API.
Ifomu lithumela imininingwane yamakhasimende nge-webhook kuZapier:
UZapier uthumela imininingwane Engxenyeni.
Ingxenye ithumela idatha ku-Braze naku-Voucherify.
UZapier ubuza i-AerisWeather ngesimo sezulu sendawo somsebenzisi, ngokususelwa kulwazi lwe-geolocation. Kunezindlela ezimbili okungenzeka zilandelwe nguZapier:
Uma kuneqhwa futhi izinga lokushisa lingaphansi kuka -15 ° C, bese:
IZapier icela iVoucherify ukuthi ivuselele ikhasimende elidalwe ngaphambilini ngemethadatha: isCold: true, isSnow: true.
Ukusatshalaliswa kwamakhadi ezipho kwamakhadi wesipho kuyazenzakalela, kuqalwe lapho ikhasimende lingena esigabeni esifanele. Ingxenye izoqoqa amakhasimende ahlangabezana nezimfuneko ezimbili zemethadatha i-isCold: true KANYE i-IsSnow: iyiqiniso.
Uma endaweni yomsebenzisi kuneqhwa, futhi izinga lokushisa lingaphezu kuka -15 ° C, bese:
UZapier ucela iVoucherify ukuvuselela ikhasimende ngemethadatha: isCold: false, isSnow: true.
Ukusatshalaliswa kwamakhodi wesaphulelo samahhala we-thermos kuyazenzakalela, kuqalwa lapho ikhasimende lingena esigabeni esifanele. Ingxenye izobutha amakhasimende ahlangabezana nezimfuneko ezimbili zemethadatha i-isCold: false KANYE ne-IsSnow: iyiqiniso.
Nasi isifinyezo sezinyathelo ongadinga ukuzithatha ukusetha lo mkhankaso:
Dala imethadatha yamakhasimende ku-Voucherify.
Yakha izingxenye zamakhasimende ku-Voucherify.
Setha imikhankaso emibili - amakhuphoni ahlukile namakhadi ezipho kuVoucherify.
Lungiselela ukusatshalaliswa okuzenzakalelayo nge-Braze usebenzisa isici Sezici Zangokwezifiso.
Dala ikhasi lokufika ngefomu lokuqoqa imininingwane yamakhasimende kanye nenkinobho yokunika amandla ukwabelana ngendawo. (lapha ungahle udinge unjiniyela ozokusiza uma ungenawo amafomu aphuma ebhokisini kungxenyekazi yakho ye-e-commerce / i-CMS).
Setha ukuhlanganiswa kwesigaba ukuze ubambe idatha evela kwifomu bese uyidlulisela ku-Braze naku-Voucherify.
Iya kuZapier bese udala iZap nge-AerisWeather, Segment, neVoucherify plug-ins.
Ungakwazi ukwenza ngokwezifiso ukugeleza ngokukhululekile ukuhlangabezana nezinhloso zethu zebhizinisi ezihlukile. Ukugeleza okungenhla kusekelwe ekuqinisekiseni izimo zezulu lapho amakhasimende egcwalisa ifomu ekhasini lokufika. Ungakushintsha lokhu kugeleza ukuze izimo zezulu zihlolwe ngesikhathi sokuhlenga isikhuthazo esitolo sakho. Kulolu hlobo lomkhankaso, wonke amakhasimende azothola lo mnikelo kepha ubuzosebenziseka kuphela ezimweni zezulu ezichazwe ngaphambilini. Kukuwe ukuthi ukugeleza kufanelana nezidingo zakho kangcono.
Kokubili ukukhushulwa kulula kakhulu ukusetha nokusebenzisa izixazululo zokuqala ze-API ezinikeza izivivinyo zamahhala. Ungazisethela ngokwakho, uqalise izinsuku ezimbalwa bese ubona imiphumela, ngaphambi kokuzibophezela kokubhaliselwe okukhokhelwayo. Uma ufuna ukusetha, ungafunda umhlahlandlela ogcwele ngezithombe-skrini nemiyalo yesinyathelo ngesinyathelo kuzo zombili izimo zomkhankaso ku IVoucherify.io 200 OK magazine.
Le mikhankaso emibili iyisimo esisodwa sokusetshenziswa kwalezi zingxenyekazi ezingenhla. Kunokuningi okunye, ukuphuma kwebhokisi ongakwakha usebenzisa lawa kanye / noma amanye amapulatifomu wokuqala we-API.
I-Voucherify iyi-API-First Promotion Management System yamaDigital Amaqembu anika amandla amaqembu wokumaketha ukuthi aqalise isigqebhezana esingumongo, ukuthumela, isaphulelo, ukunikela nemikhankaso yokwethembeka ngokushesha okukhulu.
Tags: isimo sezulu se-aerisApiBrazeengenamakhodigeolocationingxenyeI-Twiliovoucherifyweatherukumaketha kwesimo sezuluinhlamvu yesimo sezuluzapier